Ka oge na-aga, mbubata na mbupụ mba m nwere ike igosi ụkpụrụ "okpukpu abụọ dị elu" - China Foshan Hermes Steel
Ka oge na-aga, mbubata na mbupụ mba m nwere ike igosi usoro "okpukpu abụọ dị elu"
Dika onu ogugu ohuru si na General Administration of Customs, obodo m weputara nde 7.542 nde nchara na onwa March, onu ogugu nke 16.5%; ma webata 1.322 nde tọn nchara, mmụba kwa afọ nke 16.3%. N'ime ọnwa atọ mbụ, mba m ebupụla ngwaahịa tọn 17.682 nde nke nchara, mmụba kwa afọ nke 23.8%; ngụkọta mbubata nke ngwaahịa nchara bụ 3,718 nde tọn, mmụba kwa afọ nke 17.0%.
Otu n'ime ihe kachasị emetụta bụ mbupụ nke mba m na March mụbara site na 2.658 nde tọn ma e jiri ya tụnyere February, mmụba nke 54.4%, na-eme ka ọnwa ọhụrụ dị elu na mbupụ ígwè kemgbe Eprel 2017.
N'uche onye ode akwụkwọ, na iweghachite mbupụ mba m, mbubata na mbupụ mba m nwere ike gosipụta ụdị "okpukpu abụọ dị elu" n'oge na-esote. "Nke mbụ kachasị elu" gosipụtara na olu: ngụkọta nke nchara mbubata na mbupụ ga-anọgide na ọkwa dị elu; "nke abụọ kachasị elu" gosipụtara na mmụba uto, na nchara na mbupụ na mbupụ ga-enwe ogo uto dị elu n'afọ niile. Isi ihe kpatara ya:
Nke mbu, n'okpuru oke nke carbon na nnọpụiche carbon, mpaghara mpaghara ndị bụ isi na-emepụta ígwè ahazila usoro iwu nchekwa gburugburu ebe obibi dị elu, na-eduga na mbibi ọdịda nke ịnye ngwaahịa nchara mbụ dị ka obere ego na nchara ígwè. N'okpuru ọnọdụ a, ngwaahịa ofesi nke mba ofesi juputara n'ime ahịa anụ ụlọ. Enwere ike ịhụ nke a site na nnukwu mbupụ ngwa ahịa ọla edo Vietnam na China.
Onye dị mkpa na-ahụ maka njikọ ụlọ ọrụ ahụ ekwuola na mbụ na ọ na-agba ume maka mmụba nke mbubata ngwaahịa ndị bụ isi dị ka akwụkwọ nchara ma nye ọrụ zuru oke maka ọrụ nke mbubata mbubata iji hụ na ahịa nke ụlọ. Onye ode akwukwo kwenyere na ibubata ngwa ahia mbu nke igwe n ​​’ogha n’iru niru, nke g’eme ka otutu ndi mmadu na ebubata n’ime mba anyi.
Nke abụọ, ọdịiche ọnụahịa dị n'etiti ahịa ụlọ na nke mba ọzọ na-enye ọnọdụ dị mma maka mbupụ ígwè ụlọ. Site na mgbake nke ina n'ahịa esenidụt, ọnụ ahịa nchara mba ụwa agbapụtala nke ọma, na ọnụahịa ọnụahịa na ngwaahịa ụlọ ụlọ na-agbasawanye. Were HRC dị ka ihe atụ. Ka ọ dị ugbu a, ọnụahịa HRC bụ isi na ahịa US eruola US $ 1,460 / ton, nke kwekọrọ na RMB 9,530 / ton, ebe ọnụahịa HRC ụlọ bụ naanị ihe dịka 5,500 Yuan / ton. Maka nke a, mbupụ nke nchara na-abawanye uru. Onye edemede ahụ buru amụma na ụlọ ọrụ nchara ga-eme ngwa ngwa ịhazi usoro iwu mbupụ na ọkwa na-esote, na mbupụ mbupu nke ngwaahịa nchara ga-adị elu n'oge dị mkpirikpi.
Ka ọ dị ugbu a, isi ihe edoghị anya bụ mmezi nke usoro nkwụghachi ego nchara nchara. Mgbe atumatu a ga-emejuputa atumatu adighi ugbua. Otú ọ dị, onye edemede ahụ kwenyere na o yighị ka nkwụghachi ụtụ ụtụ nchara ga-abụ "kpochapụ" ozugbo, mana "nhazi nke ọma" site na 13% dị ugbu a ruo ihe dịka 10% nwere ike ịbụ nnukwu ihe puru omume.
N'ọdịnihu, nhazi nke ngwaahịa mbupụ ụlọ ga-eru nso na ngwaahịa ndị bara uru bara uru, na mbupụ nchara ga-abanye n'ọkwa "atọ dị elu" nke "ịdị elu dị elu, gbakwunye ọnụ ahịa dị elu, na nnukwu olu" iji kpuchie ọnụ ahịa ụgwọ nke mgbanwe ndozi ụtụ isi.
Karịsịa, ọnụego mbupụ nke ngwaahịa nchara pụrụ iche ga-abawanye. Ihe ndekọ ahụ na-egosi na nke nde tọn 53.68 nke ígwè nke mba m bupụtara na 2020, Ogwe na wires na-enweta 12.9%, akụkụ na steels dị na 4.9%, efere e nyere 61,9%, ọkpọkọ na-aza 13.4%, na ígwè ndị ọzọ. ụdị dị iche iche ruru ruru 6,9%. N'ime nke a, 32.4% bụ nke ígwè pụrụ iche. Onye edemede ahụ na-ebu amụma na n'ọdịnihu, n'okpuru nduzi nke mgbanwe nke iwu nkwụghachi ego mbupụ, ọnụego nke mbupụ ụlọ ụlọ pụrụ iche ga-abawanye.
N'ikwekọ, mbubata ígwè ga-egosi usoro nke "mmụba ngwa ngwa na ọnụọgụ nke mbubata ngwaahịa mbụ na mmụba na-aga n'ihu na mbubata nchara elu". Dika nyocha nke ulo na mmepe nke igwe di elu na-aga n’ihu na-abawanye, onu ogugu nke ihe nbata di elu nwere ike iju. Ndị ụlọ ọrụ nchara ụlọ ga-akwadebe nke ọma maka nke a, bulie usoro ngwaahịa n'oge, ma chọọ ohere mmepe na usoro mgbanwe nke mbubata na mbupụ ahịa.